စဈကိုငျးတိုငျး နဲ့ ကယားပွညျနယျ ကို အကောငျးဆုံးထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ပွီလို့ MRTV နဲ့ MWD တှငျ ကွငွော… SeeMore – Myanmar Media
စဈကိုငျးတိုငျး နဲ့ ကယားပွညျနယျ ကို အကောငျးဆုံးထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ပွီလို့ MRTV နဲ့ MWD တှငျ ကွငွော………….
စဈကောငျစီတှေ အသအေပြောကျမြား လှနျးလှတဲ့ စဈကိုငျးတိုငျးနဲ့ ကယား ပွညျနယျတှငျ အကောငျးဆုံးထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ကွောငျး စဈကောငျစီ ဝါဒ ဖွနျ့ခြီရေးလုပျနသေော MRTV နဲ့ MWD တှငျ ယနေ့ ည ( ၈ ) သတငျး မှာ ကွညော ခဲ့ပါတယျ ။
တကယျကို ပဲ ထိနျးခြုပျနိုငျခွငျး ရှိ မရှိ ကို တော့ ပွညျသူအားလုံးလဲ သိပွီးသား ဖွဈပါမှာပါ။ တပျတှငျးဝါဒ ဖွနျ့ဖို့ အတှကျ နိုငျငံပိုငျ ရုပျမွငျသံကွား လိုငျးတှမှော ဘယျလို ပဲ ကွညော နပေမေယျ့ တကယျတနျးမှာ ဆိုရငျ စဈကောငျစီ တပျသားမြား အကြ အဆုံးမြား ပွား လှတဲ့
စဈကိုငျးတိုငျး ၊ မကှေးတိုငျး ၊ ကယားပွညျနယျ ၊ ကရငျပွညျနယျ ကခငျြပွညျနယျ နဲ့ နိုငျငံ အနှံ့က မွို့ကွီးမြား မှာလဲ ဘယျလိုမှ ထိနျးခြုပျနိုငျခွငျး မရှိသေးတာလဲ တဈနိုငျငံလုံး က ပွညျသူတှေ အားလုံး အသိပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကို တောငျ အရှကျ မရှိ ပဲ နိုငျငံပိုငျ ရုပျမွငျသံကွား လိုငျးဖွဈတဲ့ MRTV နဲ့ MWD တို့မှာ ဘယျလိုမကျြနှာမြိုးနဲ့ ကွောညာနိုငျတာလဲ ဆိုတာကတော့ တျောတျော လေး ကို အရှကျ မရှိရာ ကပြါတယျ ။
အာဏာသိမျးစဈကောငျစီ ရဲ့ လုပျရကျတှကေတော့ တျောတျောလေး ကို အရှကျတရားကငျးမဲ့လှနျးတယျ ဆိုတာ လဲ ပွညျသူတှေ အားလုံးလဲ သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။
မွနျမာ ပွညျသူပွညျသား မြား အားလုံး လဲ အာဏာသိမျး စဈကောငျစီ လကျအောကျ အမွနျဆုံး လှတျမွောကျ စိတျခမျြးသာ ကိုယျကနျြးမာစှာနဲ့ နထေိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
စစ်ကိုင်းတိုင်း နဲ့ ကယားပြည်နယ် ကို အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ MRTV နဲ့ MWD တွင် ကြေငြာ………….
စစ်ကောင်စီတွေ အသေအပျောက်များ လွန်းလှတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းနဲ့ ကယား ပြည်နယ်တွင် အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း စစ်ကောင်စီ ဝါဒ ဖြန့်ချီရေးလုပ်နေသော MRTV နဲ့ MWD တွင် ယနေ့ ည ( ၈ ) သတင်း မှာ ကြေညာ ခဲ့ပါတယ် ။
တကယ်ကို ပဲ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ ကို တော့ ပြည်သူအားလုံးလဲ သိပြီးသား ဖြစ်ပါမှာပါ။ တပ်တွင်းဝါဒ ဖြန့်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား လိုင်းတွေမှာ ဘယ်လို ပဲ ကြေညာ နေပေမယ့် တကယ်တန်းမှာ ဆိုရင် စစ်ကောင်စီ တပ်သားများ အကျ အဆုံးများ ပြား လှတဲ့
စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ မကွေးတိုင်း ၊ ကယားပြည်နယ် ၊ ကရင်ပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ် နဲ့ နိုင်ငံ အနှံ့က မြို့ကြီးများ မှာလဲ ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးတာလဲ တစ်နိုင်ငံလုံး က ပြည်သူတွေ အားလုံး အသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို တောင် အရှက် မရှိ ပဲ နိုင်ငံပိုင် ရုပ်မြင်သံကြား လိုင်းဖြစ်တဲ့ MRTV နဲ့ MWD တို့မှာ ဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ ကြောညာနိုင်တာလဲ ဆိုတာကတော့ တော်တော် လေး ကို အရှက် မရှိရာ ကျပါတယ် ။
အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ရဲ့ လုပ်ရက်တွေကတော့ တော်တော်လေး ကို အရှက်တရားကင်းမဲ့လွန်းတယ် ဆိုတာ လဲ ပြည်သူတွေ အားလုံးလဲ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
မြန်မာ ပြည်သူပြည်သား များ အားလုံး လဲ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ လက်အောက် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။